DEG DEG-Toogasho ka dhacday Boosaaso | Puntland
DEG DEG-Toogasho ka dhacday Boosaaso
kooxo ku hubeysan baastoolado ayaa goordhawayd magaalada bosaaso toogasho ku dilay nin Darewal ka ahaa gaadiidka loo yaqaano BL-ka ee ka shaqeeya xaafadaha magaalada Bosaaso.
Ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Xamari iyadoona goobjoogayaal ku sugnaa goobta ay sheegeen in raggii dilka geysatay ay rasaas kala dhaceen qeybta sare ee jirkiisa isla markaana uu goobta ku geeriyooday.
goobta dilka uu ka dhacay ayaa ahayd goob saxmad badan oo ay ka baxaan gaadiidka ay adeegsadaan dadka shacabka gaar ahaan halka loo yaqaan boosteejada BL-da ee Raf iyo raaxo.
Dableyda dilka geysatay ayaa lagusoo waramayaa in ay ka baxsadeen goobta iyadoona dilka kadib ay halkaasi gaareen ciidamada amaanka Bosaaso kuwaas oo haatan baaritaan kawada goobta uu dilku ka dhacay.
Ilaa iyo iminka lama oga sababta loo dilay ninkaasi darewalka ahaa iyo ciddii dishayba,waxaana arintan ay kusoo beegmaysaa xilli goor sii horeysay ay dabley kale oo hubeysan ay qof shacab ah ku dhaawaceen meel ku dhow halka lagu dilay ninkaasi wadahaa ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya xaafadaha magaalada Boosaaso.